Isikhathi sikaMthandazo sesifikile ekugcineni | Scrolla Izindaba
Isikhathi sikaMthandazo sesifikile ekugcineni
Kuthathe iminyaka eyisikhombisa, kodwa uMthandazo Gayta ulitholile iphimbo lakhe, futhi manje useyangena emkhakheni wosaziwayo.
Ingoma yakhe eshisa izikhotha, ethi Senzeni ayikhiphe ezinyangeni ezine ezedlule, ithole i-platinum ngokubukwa ngabantu abayisigidi esiyi-1.3 ku-YouTube futhi sekumvulele iminyango eminingi.
Lo mculi ophinde abe umbhali wezingoma wayazi ukuthi le ngoma izoba nkulu ngoba ikhuluma ngento abantu abaningi abangazihlanganisa nayo kodwa wayengalindele ukuthi izothola i-platinum ngokushesha okungaka.
“Ngikholelwa kakhulu kimina nasemsebenzini wami. Kodwa bengingacabangi ukuthi abantu bazoyamukela ngendlela abenza ngayo. Ngisamangele namanje.”
UMthandazo ukhiphe ingoma yakhe yesibili ethi Abafana nayo eyimpumelelo enkulu.
Ezinsukwini ezinhlanu ngemuva kokukhishwa kwayo ibivele ibukwa ngabantu abayizi-4 900 futhi yedlula amashadi amaningi omculo.
Lesi sihlabani, esazalelwa sakhulela e-Weiler Farm, e-Elandsfontein, eGoli uthe imizamo yakhe ayigcini ngokunikeza abantu into abazoyidansela kodwa nokusabalalisa ulwazi ngezinkinga imiphakathi ebhekana nazo nsuku zonke.
Uhambo lomculo lukaMthandazo lwaqala esikoleni samabanga aphansi lapho ayecula khona kwikhwaya yesikole.
Ngowezi-2014, wakhipha izingoma zakhe ethi Ezimnandi, Nawe ne-ABC kodwa azikwazanga ukusabalala kakhulu.
Ukhiphe i-EP yakhe yokuqala, UMonde ngenyanga edlule.